Circuit Breaker2၏ ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက် - သတင်း - Wenzhou Zhechi Electric Co., Ltd
ကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်circuit breaker 2
1. အားသွင်းခြင်း အကာအကွယ်
အားသွင်းခြင်း အကာအကွယ်ကို အဆင့်နှစ်ဆင့် ကန့်သတ်ချက်အဆင့် နှစ်ဆင့်ဖြင့် လက်ရှိနှင့် တစ်ဆင့် သုည-အစီအစဥ် ကျော်လွန်-လက်ရှိတို့ ပါဝင်သည်။ လျှပ်စီးကြောင်းအား circuit breaker ၏ TA မှ ယူသည်။ အားသွင်းခြင်း အကာအကွယ်ကို ဖွင့်လိုက်သောအခါ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ၏ အဆင့် လက်ရှိ အစိတ်အပိုင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဆက်တင်များ နှောင့်နှေးပြီးနောက် လည်ပတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အားသွင်းကာကွယ်ရေး၏ ထွက်ပေါက်သည် ရွေ့လျားသွားမည်ဖြစ်သည်။circuit breaker. အားသွင်းခြင်း အကာအကွယ်ကို အသက်သွင်းပြီးနောက်၊ ချို့ယွင်းမှုကာကွယ်ရေးကို အသက်သွင်းပြီးနောက် အခြားဆားကစ်ဘရိတ်ကာများသည် ချို့ယွင်းမှုကာကွယ်ရေးနှောင့်နှေးမှုပလပ်ပေါက်မှတစ်ဆင့် ခလုတ်တိုက်သွားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ချို့ယွင်းမှုကာကွယ်မှု၊ မသေဇုန်ကာကွယ်မှု၊ ဆန့်ကျင်မှုကာကွယ်မှု၊ နှင့် အားသွင်းကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံး ပိတ်ဆို့ပြီး ပြန်လည်ပိတ်နိုင်သည်။ လိုင်း (transformer) အားအားသွင်းနေချိန်တွင်သာ အားသွင်းခြင်းအကာအကွယ်ကို အသက်သွင်းထားပြီး အားသွင်းမှုပုံမှန်ဖြစ်ပြီးနောက်ချက်ချင်းထွက်ပါမည်။
Dead zone ၏အကြောင်းရင်း- circuit breaker နှင့် current transformer အကြား circuit short circuit ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ၊ များစွာသော အခြေအနေများတွင် အကာအကွယ်ကို အသက်သွင်းပြီးနောက် ချွတ်ယွင်းချက်အား ဖယ်ရှား၍မရပါ။
dead-zone configuration ၏ အရေးပါပုံ- ဘူတာရုံရှိ dead-zone ချို့ယွင်းချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ လက်ရှိသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ပိုကြီးပြီး စနစ်အပေါ် သက်ရောက်မှုလည်း ပိုကြီးပါသည်။ ဖယ်ရှားရန် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်သော်လည်း၊ ချို့ယွင်းမှုကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် ကြာရှည်စွာနှောင့်နှေးမှုလိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့် အထူးအားဖြင့် ပျက်ကွက်မှုကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သော အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် dead zone protection ကိုသတ်မှတ်ပါ။
Dead zone protection input- ကျရှုံးမှုကာကွယ်မှုထည့်သွင်းမှုအပေါ် အခြေခံ၍ dead zone protection control ဟူသောစကားလုံးကို အကျိုးသက်ရောက်စေရန် dead zone protection function ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။
dead zone protection ၏လုပ်ဆောင်ချက်- three-phase trip signal + three-phase trip + dead zone လက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်၊ dead zone နှောင့်နှေးပြီးနောက်တွင် အသက်ဝင်ပါသည်။
Dead zone protection outlet- ဆိုသည်မှာ breaker failure protection outlet နှင့် အတူတူပင်circuit breakers များside circuit breaker ၏ ချို့ယွင်းချက် outlet တွင် ခလုတ်တိုက်မိကြပြီး side circuit breaker ၏ dead zone ထွက်ပေါက်တွင် circuit breaker များ ခလုတ်တိုက်မိကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် dead zone protection သည် ပျက်စီးမှုကာကွယ်ရေးပြားတွင် တွဲထားသည်။ dead zone protection ကို အစားထိုး ချို့ယွင်းမှု ကာကွယ်မှု အဖြစ်လည်း နားလည်နိုင်ပါသည်။
အဆင့်သုံးဆင့် မကိုက်ညီမှု၏ မူလဇစ်မြစ်- ခွဲခြမ်းအဆင့်အတွက်circuit breakerစက်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးနှင့် လည်ပတ်မှုတို့ကြောင့်၊ လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း သုံးဆင့်ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ၏ တသမတ်တည်းလုပ်ဆောင်မှုများ ရှိနိုင်ပြီး အဆင့်ပြည့်မဟုတ်သည့် ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အခြေအနေတွင် အဆင့်တစ်ဆင့် သို့မဟုတ် နှစ်ခုသာ ခလုတ်တိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အဆင့်သုံးဆင့်မညီညွတ်ခြင်း၏ အန္တရာယ်- စနစ်သည် အဆင့်ပြည့်မဟုတ်သော လည်ပတ်မှုအခြေအနေတွင် ရှိနေသောအခါ၊ စနစ်အတွင်းရှိ အနုတ်လက္ခဏာ၊ သုညအစီအစဥ်နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများသည် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အချို့သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီး မှန်ကန်သောလည်ပတ်မှုကိုလည်း ထိခိုက်စေပါသည်။ system protection device ဖြစ်သောကြောင့် ပါဝါစနစ်အား Incomplete phase operation အတွက် အချိန်အကြာကြီး ထားခွင့်မရှိပါ။
လိုင်းပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း မအောင်မြင်ပါက၊ စနစ်သည် အဆင့်မပြည့်လည်ပတ်မှုသို့ ဝင်ရောက်သည့်အခါ၊ ဤအမှားကို ဖယ်ရှားရန် အခြားကာကွယ်မှု ရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ full-phase မဟုတ်သော ကာကွယ်မှု (three-phase inconsistent protection) ကို split-phase operation ၏ circuit breaker တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ အဆင့်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးသောအခါ အခြားအဆင့်များကို ကျော်သွားကြသည်။
အဆင့်သုံးဆင့်မကိုက်ညီမှုကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်း- သုံးဆင့်မညီမညာဖြစ်မှုကို ဖယ်ရှားရန် အကာအကွယ်လုပ်ဆောင်ချက်။ ဗို့အားမြင့် သို့မဟုတ် အလွန်မြင့်သော ဗို့အားစနစ်များတွင်၊circuit breakerယေဘုယျအားဖြင့် နေရာတွင် ထားရှိကြသည်။
၎င်းကို ကိုယ်ထည်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ထားသော်လည်း circuit breaker protection (သို့မဟုတ် line protection) တွင်လည်း လုပ်ဆောင်ထားသည်။
ရှေ့နောက်မညီသောကာကွယ်မှုမှာ circuit breaker body တွင်ရှိပြီး၊ အမျိုးသား grid 18 တန်ပြန်မှုလိုအပ်ချက်များ- 220kV နှင့်အထက် ဗို့အားအဆင့် circuit breakers များ များသည် circuit breaker body ၏ သုံးဆင့်အနေအထားဖြင့် တပ်ဆင်သင့်သည်
မညီညွတ်သောကာကွယ်မှု။ single-phase ခလုတ်တိုက်ပြီးနောက်မှာပင်circuit breakerပြန်လည်ထုတ်ယူသည့်လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဖိအား၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ သာမညပတ်လမ်းစသည်တို့ကြောင့် circuit breaker အား ပြန်ပိတ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက၊ အဆင့်သုံးဆင့်သည် 2-2.5s အတွင်း ခလုတ်တိုက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ထုတ်ယူရန်မလိုအပ်ပါ။ စနစ်၏လုံခြုံရေးကိုသေချာစေပါ။
circuit breaker တွင် three-phase consistency protection မရှိပါက၊ သီးခြားသုံးဆင့်မကိုက်ညီမှုကာကွယ်ရေးကိရိယာကို တပ်ဆင်နိုင်သည်။ circuit breakers များ များမှလွဲ၍ သီးခြားသုံးဆင့်မကိုက်ညီသော ကာကွယ်မှု
သုံးဆင့်မကိုက်ညီမှုကို စစ်ဆေးရန်အတွက် စတင်ပတ်လမ်းကိုဖွဲ့စည်းသည့် အရန်အဆက်အသွယ် သို့မဟုတ် တည်နေရာအဆက်အသွယ်အပြင်၊ ဆားကစ်၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို မြှင့်တင်ရန် ဆားကစ်ကို ပိတ်ဆို့ရန်အတွက် သုည sequence လက်ရှိနှင့် negative sequence လက်ရှိကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
အဆင့်သုံးဆင့်မညီမညွတ်ကာကွယ်မှုထည့်သွင်းခြင်း- သုံးဆင့်မကိုက်ညီမှုကာကွယ်မှုအပျော့အပြားနှင့်အမာပြားနှစ်ခုလုံးကိုထည့်သွင်းသောအခါ၊ သုံးဆင့်မညီမညွတ်ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်သည်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
အဆင့်သုံးဆင့် ကွဲလွဲမှုမရှိသော စတင်ခြင်း- သုံးဆင့်ခုန်အနေအထား ထည့်သွင်းမှု ကွဲလွဲနေသည် + ခုန်နေသော အနေအထား အဆင့်မရှိသော စီးဆင်းမှု။
သုံးဆင့်မညီမညွတ်ကာကွယ်မှု၏လုပ်ဆောင်ချက်- မညီညွတ်မှုကို သုညအဆက်အဖွင့်ထိန်းချုပ်မှုစကားလုံးဖြင့် အသက်သွင်းသည်၊ မညီညွတ်သောစတင်မှုကို သုညအဆက်ဖြတ်လက်ရှိစံသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် စတင်သည်၊ ထို့နောက် သုံးဆင့်ဆားကစ်ဘရိတ်ကာသည် မကိုက်ညီသောနှောင့်နှေးမှုပလပ်ပေါက်မှတဆင့် ခလုတ်တိုက်သွားသည် . မညီညွတ်မှုကို အနှုတ်အဆက်အဖွင့် ထိန်းချုပ်မှုစကားလုံးဖြင့် အသက်သွင်းသည်၊ မညီညွတ်သော စတင်မှုအား အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သည့် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် စတင်သည်၊ ထို့နောက် သုံးဆင့်ဆားကစ်ဘရိတ်ကာကို မညီညွတ်သောနှောင့်နှေးပလပ်ပေါက်ဖြင့် ခလုတ်တိုက်သွားပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ စကားလုံးနှစ်လုံးစလုံးကို ထိန်းချုပ်လိုက်သောအခါတွင် အဆင့်သုံးဆင့်ဖြစ်သည်။circuit breakerကိုက်ညီမှုမရှိသော အဆင့်သုံးဆင့်စတင်ပြီးနောက် မတည်ငြိမ်သောနှောင့်နှေးမှုပလပ်ပေါက်မှ ခလုတ်တိုက်သွားပါမည်။
အဆင့်သုံးဆင့် ရှေ့နောက်မညီမှုကို အကာအကွယ်ပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပျက်ကွက်မှုမစတင်ဘဲ၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် ပြန်လည်အနီးကပ်စနစ်ကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။
သုံးဆင့်မကိုက်ညီသောကာကွယ်မှုလော့ခ်ချခြင်း- အဆိုပါcircuit breaker12 စက္ကန့်ကြာ အနေအထားသုံးဆင့် မကိုက်ညီသည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေသည်၊ အနေအထား မညီမညာဖြစ်နေသော အချက်ပေးအချက်ပြမှုကို ထုတ်ပေးပြီး အဆင့်သုံးဆင့် မညီမညွတ် ကာကွယ်မှုကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။
သုံးဆင့်တစ်ဆက်တည်းမညီသောကာကွယ်မှု၏အချိန်ထပ်ဆင့်လွှင့်ခြင်း၏သတ်မှတ်ခြင်းမူကြမ်း- relay အကာအကွယ်ကိရိယာ၏သုံးဆင့်မကိုက်ညီမှုကာကွယ်မှုနှောင့်နှေးခြင်းဆက်တင်သည်ပြန်လည်ပိတ်ချိန်၏လုပ်ဆောင်မှုအချိန်ကိုရှောင်ရှားနိုင်သင့်သည်။
4. လက်ငင်းနောက်သို့ ခုန်ပါ။
ဤကွင်းဆက်ကို ထည့်သွင်းခြင်းရှိမရှိကို အသုံးပြုသူမှ ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ချက်ခြင်းနောက်ဆက်တွဲကို- အဆင့်တစ်ဆင့် နောက်ဆက်တွဲ၊ အဆင့်နှစ်ဆင့် ခရီးစဉ် ပေါင်းစပ်သုံးဆင့်နှင့် အဆင့်သုံးဆင့် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။ ဤကွင်းသုံးကွင်းထွက်ပြီးနောက် ခုန်ပါ။
ဒါအတွက်circuit breaker၊ စတင်သည့်ဒြပ်စင်သည် တက်ကြွနေချိန်တွင် အထက်ဖော်ပြပါ ဆားကစ်သုံးခုမှသာလျှင် ခရီးလမ်းညွှန်ချက်တစ်ခု ပေးပို့နိုင်သည်။ Single-phase နောက်ဆက်တွဲ- လိုင်းကာကွယ်မှုမှ Ta, Tb, Tc single-phase trip signal ကိုလက်ခံရရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာအဆင့်၏ high constant current element သည် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး instantaneous phase trip ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
two-phase tripping နှင့် three-phase tripping- လိုင်းကာကွယ်မှုမှ two-phase tripping signal ကိုလက်ခံရရှိပြီး two-phase tripping signal ကိုသာလက်ခံရရှိပြီး မည်သည့်အဆင့်၏ high constant current element ကို activated ဖြစ်ပြီး သုံးဆင့်၊ tripping သည် 15ms နှောင့်နှေးပြီးနောက် ပေါင်းစပ်သွားပါမည်။
အဆင့်သုံးဆင့် နောက်ဆက်တွဲ- အဆင့်သုံးဆင့် ခရီးအချက်ပြမှုကို လက်ခံရရှိပြီး မည်သည့်အဆင့်လုပ်ဆောင်မှု၏ အဆက်မပြတ်တန်ဖိုးမြင့်မားသော လက်ရှိဒြပ်စင်ကို ရရှိပြီးနောက်၊ ချက်ချင်းဆိုသလို အဆင့်သုံးဆင့် ခရီးထွက်သည်။
5. AC ဗို့အားပြတ်တောက်မှုကို စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။
AC ဗို့အားပြတ်တောက်မှုကို စီရင်ခြင်းအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်မှာ- အကာအကွယ်မစတင်ဘဲ၊ နှင့် သုံးဆင့်ဗို့အား ဗို့အား ပေါင်းလဒ်သည် 12V ထက် ကြီးနေပြီး 1.25s နှောင့်နှေးပြီးနောက် တီဗွီတို-လိုင်း ပုံမှန်မဟုတ်သော အချက်ပြမှုကို ပေးပို့ပါသည်။ တီဗီကို ချိတ်ဆက်မှု ဖြုတ်လိုက်သောအခါတွင် ပါဝါနည်းသော အချက်ပြ အစိတ်အပိုင်းကို ရုပ်သိမ်းလိုက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ထပ်တူပြုမှု ထောက်လှမ်းခြင်း နှင့် ဖိအားမဟုတ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖယ်ရှားလိုက်မည်ဖြစ်ပြီး အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ အဆင့်သုံးဆင့် ဗို့အားသည် ပုံမှန် 10s သို့ ပြန်သွားသောအခါ၊ ၎င်းသည် အလိုအလျောက် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်သည်။
6. ပုံမှန်မဟုတ်သော ခရီးအနေအထားအတွက် အချက်ပေး
TWJ သည် တက်ကြွနေပြီး အဆင့်ပတ်လမ်းတွင် လက်ရှိရှိသည်၊ သို့မဟုတ် အဆင့်သုံးဆင့်၏ TWJ အနေအထားများ မကိုက်ညီသောအခါ၊ 10S နှောင့်နှေးပြီးနောက် TWJ မူမမှန်မှုကို အစီရင်ခံပါမည်။